ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်မိခင် ကျန်းမာရေး Archives - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျစေနိုင်သော အကြောင်းရင်းများ “ရတာမလို၊ လိုတာမရ” ဆိုတဲ့ မြန်မာစကားပုံတစ်ခုရှိပါတယ်။ တချို့စုံတွဲ (လင်မယား)တွေကျတော့ ကလေးလိုချင်လို့ အမျိုးမျိုး ကြိုးစားကြသည်။ ဗေဒင်၊ ယတြာတွေ၊ အစီအရင်တွေမျိုးစုံဖြင့် ကလေးရရန် နည်းလမ်းအသွယ်သွယ်ဖြင့် ကြိုးစားကြသည်။ တချို့ကြတော့ ဆင်းရဲပြီး မပြည့်စုံတဲ့ ဘဝမို့ နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနှင့်…
All Articlesကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်မိခင် ကျန်းမာရေးမျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးအမျိုးသမီး ကျန်းမာရေး
အသက် ၄၀ ကျော် အမျိုးသမီးနှင့် သားဆက်ခြားခြင်း
“အသက် ၄၀ ကျော် အမျိုးသမီးနှင့် သားဆက်ခြားခြင်း” – ဒေါက်တာ ဖြိုးသီဟ လူတွေပြောလေ့ရှိတဲ့ စကားတစ်ခွန်း ရှိပါတယ်။ အသက် ၄၀ ကျော်မှ ဘ၀ စတာတဲ့။ မှန်သင့်သလောက်တော့ မှန်ပါတယ်။ အသက် ၄၀ ကျမှ ဘဝတစ်ခုကို…
မီးဖွားပြီးနောက်ဖြူဖျော့ပြီး အမောဖောက်ခြင်း သားသားမီးမီးလေးတွေမွေးပြီဆိုတာနဲ့ မေမေတို့ခမျာ တစ်နေ့နေ့ဒီကလေးနဲ့ပဲ ချာလည်တွေရိုက်၊ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျ ဂရုမစိုက်ဖြစ်နဲ့။အဲ့လိုမိမိကိုယ်ကိုဂရုမစိုက်ဖြစ်တော့ မဖြစ်သင့်တဲ့ဝေဒနာတွေ၊နာမကျန်းမှုတွေဖြစ်ပြီး လူပင်ပန်းရတတ်ပါတယ်။ဒီအထဲကမှ အဖြစ်များလေ့ရှိတဲ့ မီးဖွားပြီးသွေးအားနည်းတတ်တဲ့အကြောင်းလေးကိုသတိထားရအောင်ပြောပြချင်ပါတယ်။ မီးဖွားပြီးနောက်ပိုင်း ဖြူဖျော့အားနည်းပြီးအမောဖောက်တာဘာကြောင့်လဲ??? မီးဖွားပြီးနောက်သွေးအားနည်းရောဂါခံစားရတဲ့အခါမှာ ဖြူဖျော့အားနည်းတတ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကနေမှ ပိုဆိုးလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ နှလုံးအားနည်း၍အမောဖောက်ခြင်းကိုခံစားရနိုင်ပါတယ်။ရောဂါပြင်းထန်လွန်းပါက အသက်သေဆုံးသည်အထိဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရသလဲ??? အောက်ပါအကြောင်းတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်- ၁)သံဓါတ်ပြည့်ဝစွာ စားသုံးမှုမရှိခြင်း။…
All Articlesကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်မိခင် ကျန်းမာရေးမိခင်နှင့်ကလေးကျန်းမာရေးအလှအပအလှအပနှင့်နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံ
မီးတွင်းထဲ မိတ်ကပ်လိမ်းလို့ရမရ ဒီတစ်ခေါက်ပြောရမှာတော့ နည်းနည်းဆန်းတယ်။ ခေါင်းစဉ်က မီးတွင်းထဲ(မီးနေသည်)မိတ်ကပ်လိမ်းလို့ ရ/မရ တဲ့။ မိတ်ကပ်လိမ်းလို့ရမရ အရင်မပြောခင်မှာ မီးတွင်းဆိုတာကိုနည်းနည်းပြောရအောင်။ မီးတွင်းဆိုတာ မိခင်တစ်ယောက်ကလေးမွေးဖွားပြီး (၄၅)ရက်အတွင်းကိုခေါ်ပါတယ်။ ကလေးမီးဖွားပြီးတဲ့အခါမှာ မျက်နှာအသားအရေရဲ့ ပြောင်းလဲမှုလေးတွေကိုနည်းနည်းပြောပြပါမယ်… ၁)မျက်လုံးအောက်ဟာမို့ဖောင်းလာပြီး အိတ်ကလေးလိုပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ ၂)မျက်နှာအသားအရေတွေဟာပိုမိုခြောက်သွေ့လာတတ်ပြီး အသားအရောင်မညီတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ၃)ဝက်ခြံ၊တင်းတိပ်တွေလဲ…
အမျိုးသမီးများနှင့်သံဓါတ် ‘သံဓါတ်’ လူတိုင်းနဲ့ရင်းနှီးပြီးသား စကားလုံးလေး။ ဒီနေ့ကတော့ အဲ့သံဓါတ်ဆိုတာရဲ့ အကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းလေး ပြန်နွှေးပေးချင်တာ။ ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ အမျိုးသမီးတွေအတွက်အဓိကထားပြောချင်တာပေါ့။ သိကြပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်း သံဓါတ်ဟာလူတို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ သတ္တုဓါတ်တစ်မျိုး။ ဘာလို့မရှိမဖြစ်လဲဆိုတော့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဆဲလ်တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်နဲ့ အာဟာရကိုသယ်ဆောင်ပေးတဲ့ သွေးဆဲလ်လေးတွေထုတ်လုပ်ဖို့အတွက် ၎င်းကမရှိမဖြစ်မို့လို့ပါ။ အမျိုးသမီးတွေအတွက် သံဓါတ်ကဘာလို့အရေးပါတာလဲ??? ယောကျာ်းမိန်းမ မရွေးသံဓါတ်ဟာအရေးပါပါတယ်။…
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်ခံရခြင်း ဒီတဈေခါက်တော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းနွင့်အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်ခံရမှုအေကြာင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ အခြို့လဲကြားဖူးပြီးသားဖြဈသလို အခြို့အတွက်လဲ စိမ်းနေမယ့်အေကြာင်းအရာလေးဖြဈပါတယ်။ အေကြာင်းအမြိုးမြိုးကြောင့် ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရွိပေမယ့် လက်တွေ့မွာတော့ အနည်းနဲ့အျမား အမွန်တကယ်ဖြဈပကြ်နေတဲ့ကိစ္စတဈခုပါပဲ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြိန်မွာတွေ့ကြုံရတဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေဟာ မိခင်ရောကေလးကို စိတ်ရော၊ကိုယ်ပါထိခိုက်မှုတွေဖြဈေပါ်စေပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်သည်ျမားအကြမ်းဖက်မှုခံရခြင်းဟာ ကိုယ်ဝန်မေဆာင်ခင်အခြိန်ထဲကဖြဈနိုင်သလို၊ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်(သို့)မီးဖွားပြီးခြိန်မွလဲဖြဈေပါ်နိုင်ပါတယ်။ မိခင်ရော မွေးဖွားလာမယ့်ကေလးရဲ့အကြိုးအတွက်ပါ သက်ရောက်မှုျမားစွာရွိတဲ့အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုကိုထိန်းသိမ်းဖို့ရာ သုတေသနနဲ့ကိုင်တွယ်ဖြေရွင်းမှုနည်းလမ်းျမားစွာလိုအပ်နေသေးပေမယ့်…
? ဒါတွေရှောင်စို့ ဗိုက်ဗိုက်တို့ ? အိမ်ထောင်မကျခင် ဟိုတုန်းကတော့ အစဉ်တစိုက်ကြွေးကြော်ခဲ့တာ My Body – My Rule ပေါ့။ ကိုယ်ပိုင်တဲ့ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ် နဲ့ ကိုယ်ကြိုက်သလိုနေ ကြိုက်သလိုစား ကြိုက်သလိုအိပ် ကြိုက်သလို ကစား ကြိုက်သလို…
? ဗိုက်ဗိုက်တို့အတွက် အရေးကြီးတဲ့ တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေး? တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးဆိုတာ လူတိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ် အရေးသိပ်ကြီးတဲ့အရာပေါ့။ ရောဂါပိုးမွှားတွေ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ် လာမနေကြဖို့ ကာကွယ်ပေးသလို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှု အပြည့်နဲ့ လူတွေကြားမှာနေနိုင်ဖို့လည်း တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးကို အမြဲဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ သာမန်လူတွေအတွက်တောင် အရေးကြီးရင် ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်လောင်းတစ်ယောက်အတွက် ပိုအရေးကြီးတော့မပေါ့။…
မေမေတို့နဲ့ ဗိုက်ကြောပြတ်ခြင်း မေမေတို့အားလုံးနီးပါး တွေ့ကြုံရမယ့် ပြဿနာမဟုတ်တဲ့ပြဿနာ။ ဗိုက်ကြောပြတ်တာဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တိုင်းအတွက်တော့ ပြဿနာကြီးမဆိုသော်ငြားလဲ အချို့မေမေတွေအတွက်တော့ အလှပျက်စရာ၊ရှက်စရာလေးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ သင်လဲတစ်ချိန်ချိန်မှာ ကြုံတွေ့လာရတဲ့အခါ စိတ်မညစ်ပါနဲ့၊စိတ်ထဲအရမ်းထည့်ထားပြီးခေါင်းရှုပ်ခံမနေပါနဲ့၊ဒါဟာ မေမေတို့အားလုံးနီးပါးကြုံရမယ့်အရာပါ၊ အချိန်တန်အရှင်းမပျောက်သွားရင်တောင် လျော့သွားမှာဖြစ်သလို၊သက်သာအောင်လဲ လုပ်လို့ရပါသေးတယ်။ ဗိုက်ကြောပြတ်ခြင်း ဘယ်အချိန်မှာ စပေါ်မလဲ? ဟုတ်ကဲ့…
All Articlesကလေးကျန်းမာရေးကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်မိခင် ကျန်းမာရေးမိခင်နှင့်ကလေးကျန်းမာရေး
မိခငမြှတဆင့ြ သနျဓသေားကို ကူးစကရြောဂါမွား “လူဖှဈရခှငြးဟာ မိုးပေါကြ အပတြဈခွောငြးနဲ့ မှပှငေကြ အပတြဈခွောငြးဆုံဖို့ထကြ ခကတြယြ” လို့ မှတစြှာဘုရားက ဟောတောမြူခဲ့ပါတယြ… ဒီလို လူဖှဈလာဖို့ရာကော.. မိခငဝြမြးကှာတိုကထြဲမှာ ကိုးလ…မှေးဖှားလာပါပှီးက ကနွြးမာသနစြှမြးသော ကလေးတဈယောကြ ဖှဈဖို့ရာ…စသဖှင့ြ အခကွပြေါငြးမွားစှာရှိပါတယြ.. “ကံ ကံ၏အကွိုး”ကို…